Izindaba - Izindlela Ezi-8 Zokubulala Isiphetho Sakho
1. Ukuyigijimisa ngokweqile noma ngokunensa
Ukunquma ukuvinjelwa okulungile nokuphakelwa kwethuluzi lakho nokusebenza kungaba inqubo eyinkimbinkimbi, kepha ukuqonda isivinini esifanele (RPM) kuyadingeka ngaphambi kokuqala ukusebenzisa umshini wakho. Ukusebenzisa ithuluzi ngokushesha okukhulu kungadala usayizi we-chip ongaphansi noma ukwehluleka kwamathuluzi okuyinhlekelele. Ngakolunye uhlangothi, i-RPM ephansi ingaholela ekuphambukeni, ekuqedeni okubi, noma kumane kwehle amazinga okususwa kwensimbi. Uma ungaqiniseki ukuthi iyiphi i-RPM efanelekile yomsebenzi wakho, xhumana nomkhiqizi wamathuluzi.
2. Ukuyondla Kancane Kakhulu Noma Kakhulu
Esinye isici esibucayi sejubane nokuphakelwa, isilinganiso esihle kakhulu sokuphakelwa komsebenzi sihluka kakhulu ngohlobo lwamathuluzi nezinto zokusebenza. Uma usebenzisa ithuluzi lakho ngokunensa kakhulu ngesilinganiso sokuphakelayo, ubeka engcupheni yokuphinda ushaye ama-chip nokusheshisa ukugqokwa kwamathuluzi. Uma usebenzisa ithuluzi lakho ngokushesha kakhulu kwezinga lokuphakelayo, ungadala ukuphuka kwethuluzi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngamathuluzi amancane.
3. Usebenzisa Ukukhwabanisa Kwendabuko
Ngenkathi ukushaywa kwendabuko kudingekile ngezikhathi ezithile noma kufanelekile, ngokuvamile kungaphansi kwe-High Efficiency Milling (HEM). I-HEM iyindlela yokwenza izinto esebenzisa i-Radial Depth of Cut (RDOC) ephansi kanye ne-Axial Depth of Cut (ADOC) ephakeme. Lokhu kusabalala kugqoke ngokulinganayo emaphethelweni wokusika, kususa ukushisa, futhi kunciphise ithuba lokwehluleka kwethuluzi. Ngaphandle kwempilo yamathuluzi ekhula ngokumangazayo, i-HEM nayo ingakhiqiza isilinganiso esingcono nesilinganiso sokususwa kwensimbi esiphakeme, okusenza sikhuthaze ukusebenza kwakho konke okuzungezile esitolo sakho.
4. Usebenzisa Ithuluzi Elingalungile Lokubamba
Amapharamitha wokusebenza afanele anomthelela omncane ezimweni ezingaphansi kokubamba ithuluzi. Uxhumano olungelutho lwamathuluzi kungadala ukuphuma kwethuluzi, ukudonsa, nezingxenye ezilahliwe. Ngokuvamile, amaphuzu amaningi wokuxhumana ophethe ithuluzi nge-shank yethuluzi, ukuxhumana kuvikeleke kakhulu. Abaphathi bamathuluzi we-Hydraulic and shrink fit banikela ngokusebenza okuthe xaxa ngezindlela zokuqinisa imishini, njengokwenza ushintsho oluthile lwe-shank, njengama-Helical's ToughGRIP shanks kanye ne-Haimer Safe-Lock ™.
5. Ukungasebenzisi i-Variable Helix / Pitch Geometry
Isici ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokuphela kokusebenza okuphezulu, i-helix eguquguqukayo, noma iphimbo eguquguqukayo, i-geometry inguquko ecashile ejwayelekile yokuphela kwejometri. Lesi sici sejiyomethri siqinisekisa ukuthi izikhawu zesikhathi phakathi kokunqamulelwa koxhumana nensimbi yokusebenza ziyahlukahluka, kunokuba zenze kanyekanye ngokujikeleza kwethuluzi ngalinye. Lokhu kwehluka kunciphisa ukuxoxa ngokunciphisa ama-harmonics, okwandisa impilo yethuluzi futhi akhiqize imiphumela ephezulu.
6. Ukukhetha Isembozo Esingafanele
Yize ibiza kakhulu kancane, ithuluzi elinokumbozwa okulungiselelwe okokusebenza kwakho kungenza umehluko. Ukumbozwa okuningi kukhulisa ukuthambisa, kubambezele ukugqokwa kwamathuluzi wemvelo, kanti amanye akhulisa ubulukhuni nokumelana nomhuzuko. Kodwa-ke, akuyona yonke imidwebo efanelekile kuzo zonke izinto, futhi umehluko ubonakala kakhulu ezintweni eziyinsimbi nezingahambisi. Isibonelo, ukumbozwa kwe-Aluminium Titanium Nitride (AlTiN) kwandisa ubulukhuni nokumelana namazinga okushisa ezintweni zensimbi, kepha inobuhlobo obuphakeme ne-aluminium, okudala ukunamathela kobuciko bokusebenza kuthuluzi lokusika. Ngakolunye uhlangothi, ukumbozwa kweTitanium Diboride (TiB2), kunobuhlobo obuphansi ngokweqile ne-aluminium, futhi kuvimbela ukusika nokwakha onqenqemeni, futhi kwandise nempilo yamathuluzi.
7. Usebenzisa ubude obude bokusika
Ngenkathi ubude obude bokusikwa (i-LOC) budingeka impela kweminye imisebenzi, ikakhulukazi ekuqedeni ukusebenza, kunciphisa ukuqina namandla wethuluzi lokusika. Njengomthetho ojwayelekile, i-LOC yethuluzi kufanele ibe yinde kuphela lapho kudingeka khona ukuqinisekisa ukuthi ithuluzi ligcina isisekelo salo sokuqala sangempela ngangokunokwenzeka. Uma i-LOC yamathuluzi isikhathi eside iba sengozini yokuphambuka, bese inciphisa impilo yayo yamathuluzi futhi inyuse ithuba lokwephuka.
8. Ukukhetha Ukubalwa Kwemitshingo Engalungile
Njengoba kulula njengoba kubonakala, ukubalwa komtshingo wethuluzi kunomthelela oqondile futhi ophawulekayo ekusebenzeni nasekusebenzeni kwemingcele. Ithuluzi elinenani eliphansi lomtshingo (2 kuye ku-3) linezigodi ezinkulu zomtshingo nomgogodla omncane. Njengaku-LOC, i-substrate encane esisele kuthuluzi lokusika, libuthakathaka futhi liqinile. Ithuluzi elinenani eliphezulu lomtshingo (5 noma ngaphezulu) ngokwemvelo linomgogodla omkhulu. Kodwa-ke, ukubalwa kwemitshingo ephezulu akukuhle ngaso sonke isikhathi. Ukubalwa kwemitshingo ephansi kuvamise ukusetshenziswa ezintweni ze-aluminium nezinto ezingezona ezensimbi, ngokwengxenye ngoba ukuthamba kwalezi zinto kuvumela ukuguquguquka okwengeziwe kwamazinga okususwa kwensimbi, kepha futhi nangenxa yezakhiwo zamachips azo. Izinto ezingezona ezensimbi zivame ukukhiqiza ama-chips amade, ama-stringier kanye nokubalwa komtshingo okuphansi kusiza ukunciphisa ukuphinda kwe-chip. Amathuluzi wokubala umtshingo ophakeme imvamisa adingeka ezintweni ezinzima zensimbi, zombili ngamandla azo akhuphukile nangenxa yokuthi i-chip recutting ayikhathazi kangako ngoba lezi zinto zivame ukukhiqiza amachips amancane kakhulu.